ZayYarHlaing: Making of the Imaginary Paint Dancers
ကျွန်တော် ဒီနေ့Design ဆိုတဲ့ New Label လေးတစ်ခုနှင့်အတူ Making of the Imaginary Paint Dancers ဆိုတဲ့ Photoshop Tutorial လေးတစ်ခုကိုစလိုက်ပါပြီ။ ဆ၇ာကြီးလုပ်ခြင်တာတော့မဟုတ်၇ပါဘူး။ သယ်၇င်းတို့ သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဝါသနာပါတာတွေထဲမှာ Graphic Desing ဆိုတဲ့ ပညာ၇ပ်တစ်ခုလဲပါဝင်ပါတယ်။ ဒီတော့ကာ ...
သယ်၇င်းတို့ သိထားလေ့လာထားသည်များ၇ှိခဲ့လို့ကျွန်တော် Blog ပေါ်မှတဆင့်မျှဝေခြင်တဲ့စိတ်ကူးလေးများ၇ှိခဲ့မယ်ဆို၇င်တော့ ကျွန်တော်၇ဲ့Email ad က zayyarhlaing1@gmail.com ပါ။ Mail နဲ့ ပို့ ပေးလိုက်ပါ။ ပေးပို့ သူ၇ဲ့ နာမည်နဲ့ အတူ ကျွန်တော်ဖေါ်ပြပေးပါ့မယ်။
ကဲသယ်၇င်းတိုေ၇ ... စလိုက်ကြ၇အောင်ဗျာ။
ဒီလို Image လေးတစ်ခု၇အောင်ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးကြည့်၇အောင်နော်။
Step 1. File>New ကနေ Black Backgroung color နဲ့ 595×842 pixels ၇ှိတဲ့ Document လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပါ။
Step 2. Layer Tab မှာ Create New Layer ခေါ်ပြီး Grey Spot ဆိုပြီး Layer Name ပေးလိုက်ပါ။
Soft Rounded 600px and color #333333 နဲ့ Brush တစ်ခုဖန်တီးပြီး Document ရဲ့Center မှာ Click တစ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုလေး၇သွားပါ့မယ်။
Step 3. အထက်ပါနည်းအတိုင်း Brush Tool ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ထပ် color လေးတွေနဲ့ အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပေးပါ။
Step 4. Downloadacool texture from KrakoGraff
ဆိုတဲ့ Link ကနေ texture ကို download ချ၊ ၇လာတဲ့ textuer ကို Grey Spot Layer ရဲ့ အောက်မှာ texture ဆိုတဲ့ name နဲ့new layer တစ်ခုထပ်ဖန်တီးပြီး texture layer ကို image > Adjustments > Desaturate လုပ်။ ပြီး၇င် Blend Mode ကနေ Overlay လုပ်။
Step 5. Download Paint Bottle from SXC.hu
ကနေအောက်က ပုလင်းပုံ Image လေးကို download ချ၊ crop လုပ်ပြီး၇င် bottle ဆိုတဲ့ layer name
နဲ့Gray Spot layer ၇ဲ့ အပေါ်မှာ new layer တစ်ခုထပ်ပြီးဖန်တီးပါ။
Step 6. Shadows ဆိုတဲ့ layer name နဲ့new layer တစ်ခုထပ်ဖန်တီးပြီး အောက်ပါအတိုင်း shadow လေးတွေကို Brush Tool နဲ့ ဖန်တီးလိုက်ပါ။
Step 7.Download Paint Tossing Pack from Media Militia
ကနေအောက်ပါ Image လေးကို download ချပြီး new layer ဖန်တီးကာ Magic Wand Tool ဖြင့် အဖြူေ၇ာင် Background များကို select လုပ်၊ Delect လုပ်ပစ်ပါ။
Step 8. Image > Adjustments > Hue/Saturation မှသွားပြီး colorize box လေးကို click လုပ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်း color ကိုညှိယူပါ။ ထို့ နောက် ၄င်း layer ၏ Blending Options ကိုသွားပြီး
Inner Glow ကို select လုပ်၊ ကျန်သော setting များကိုလည်းအောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပါ။
Step 9. အပေါ်တွင်ဖေါ်ပြပြီးသည့်နည်းဖြင့် အောက်ပါပုံအတိုင်း ဆက်ပြီးဖန်တီးပြုလုပ်ပါ။
Step 10. Download Zentai image from Mjranum Stock
မှ အောက်ပါ Image ကို Download ချ၊ crop လုပ်၊ lady ဟု name ပေးပြီး Blackground layer ၏ပေါ်တွင် new layer တစ်ခုဖန်တီးပါ။
Step 11. Image > Adjustments > Hue/Saturation မှ colorize ပြုလုပ်ပြီး အောက်ပါ Image မှ color ကိုပြောင်းလဲဖန်တီးပါ။
Step 12. Filter > Artistic > Plastic Wrap မှအောက်ပါအတိုင်း setting များကိုညှိယူပါ။
Step 13. ထို့ နောက် ၄င်း Image ကို blue paint splash ပေါ်တွင် Resize ပြုလုပ် size ကိုညှိယူပြီးသောအခါ Eraser tool ကိုသုံးပြီးအောက်ပါ Image အတိုင်း၇အောင်ဆက်ပြီးညှိယူပါ။
Step 14. အထက်ပါနည်း အတိုင်းအသုံးပြပြီးအောက်ပါ Image ၇သည်အထိ ဆက်ပြီးဖန်တီးပြုလုပ်ပါ။
Step 15. Glows ဟူသော name ဖြင့် new layer တစ်ခုထပ်မံပြုလုပ်ပြီး Soft Rounded 50px and white color Brush tool ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖန်တီးပြုလုပ်ပါ။
Step 16. Download the Smoke Pack from Media Militia
မှ Smoke Pack ကို download ချပြီး bottle layer ၏ အောက်တွင် Smoke ဟူသော new layer တစ်ခုဖန်တီးပြီး အောက်ပါအတိုင်း မီးခိုးလေးများ၇အောင်ဖန်တီးပေးပါ။
Step 17. Smoke layer ၏ အောက်တွင် Scribbles ဆိုသော name ဖြင့် new layer တစ်ခုခေါ်ပြီး
Soft Rounded 2px and white color Brush Tool ဖြင့်အောက်ပါ Image အတိုင်း၇အောင်ဖန်တီးပါ။
Step 18. Blending Option ကိုသွားပြီး Outer Glow ကို select လုပ်ကာ ကျန်သော setting များကိုလဲအောက်ပါ Image အတိုင်းပြုလုပ်ပေးပါ။
Step 17. Scribble layer ကို Duplicate ပြုလုပ်ပြီးအောက်ပါ Image အတိုင်း၇အောင်ညှိယူပါ။
Step 18. Glowing Lines ဆိုတဲ့ new layer တစ်ခုထပ်မံဖန်တီးပြီး Pen Tool ကိုအသုံးပြုကာ အောက်ပါ Image အတိုင်းဆက်ပြီးဖန်တီးပေးပါအုံး။ Path ပေါ်မှာ Right Click ထောက်ပြီး Stoke Path ကိုေ၇ွး၊ Simulate Pressure ကို Check လုပ်ပြီး OK ဖြင့်ထွက်ပါ။ ပြီးနောက် Layer Blending Options မှ Oulter Glow ကို select လုပ်ပေးပါ။
Step 19 . Photo Filter ဖြင့် ၇ှိသမျှ Layer အားလုံးကို Cooling Filter (82)၊ Density 25% ဖြင့် ညှိပေးလိုက်ပါအုံး။
Step 20. Layer များ၏ Levels ကိုလည်း 0, 0.70, 255 ဆိုပြီး setting ချပေးလိုက်ပါအုံး။
ကဲ ..... သယ်၇င်းတို့ေ၇၊ တော်တော်လေးမှမောသွားကြလားဗျာ။
မမောကြပါနဲ့ တော့ဗျာ Tutorial လေးကဒီနေ၇ာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
သယ်၇င်းတို့ ဖန်တီးပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့ အောက်က Image လေးကိုကြည့်၇င်းအမောဖြေနိုင်ကြပါစေဗျာ...။
Posted in Design by Zay Yar Haling
0 comments: to “ Making of the Imaginary Paint Dancers ”